Dowladda Hoose ee Xamar oo hirgalinaysa hannaanka dhismaha fudud ee waddooyinka. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Dowladda Hoose ee Xamar oo hirgalinaysa hannaanka dhismaha fudud ee waddooyinka.
Dowladda Hoose ee Xamar oo hirgalinaysa hannaanka dhismaha fudud ee waddooyinka.
Guddoomiye ku xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan iyo guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Gobolka Basma Caamir Jakeeti ayaa si wadajir ah xarigga uga jaray Waddo loo qabeeyay hannaanka dhismaha fudud ee loo yaqaanno Inter-lock ah oo ku taalla degmada Xamar-Jajab ee gobolka Banaadir.
Waddadaan inter-lock-ga ah oo aheyd mid ay dhibaato badan ku qabeen burburkeeda bulshada ku nool degmada Xamar-jajab iyo gaadiidka isticmaalo ayaa waxaa dhisay maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Xamar-jajab oo uu horkacayo guddoomiyaha degmada Guhaad Sheekh Xasan.
Guddoomiye ku xigeennada gobolka Banaadir Axmed Xasan Iimaan iyo Basma Caamir Jakeeti ayaa bulshada degmada kula dardaarmay in ay ilaashadaan bilicda waddadaan iyo guud ahaan degmada Xamar-jajab si ay tusaale ugu noqdaan degmooyinka kale.
Dowladda hoose ee Xamar ayaa billooyinkii dambe billowday dib u dhiska waddooyinka loo yaqaan inter-locks oo aan dib loo dhisin burburkii kaddib,waxeyna bulshadu maamulka ku ammaaneed horumarinta waddooyinka.
Previous articleDFS oo Barnaamijka Baxnaano ka daah furaysa Baydhabo.
Next articleTiradii ugu yarayd oo gudanaya acmaasha xajka ee sanadkan.